သတ္တုသန့်ရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ် နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားရမယ့်အရာများ Taiwan မှ သတ္တုသန့်ရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊
YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. ကိုအထူးပြုတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သောကျောက်ထုတ်ကုန်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါသည် သတ္တုသန့်ရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်။ ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအော်တိုအီလက်ထရွန်းနစ်ထုတ်ကုန်များ, ထုတ်ကုန်များ၏လျင်မြန်တဲ့ updates တွေကိုပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာစားသုံးသူ '' ဝယ်လိုအားအညီသစ်ဆန်းသောဒီဇိုင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့်ယာဉ်မောင်းများအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ရောင်းချမှု service.our စျေးကွက်ရှယ်ယာပြီးနောက်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးနှင့်ကောင်းမွန်ပိုမိုချဲ့ထွင်ခဲ့ကြ၎င်း၏နိမ့်စျေးနှုန်းကျော်ကြားပါတယ်။ ကျနော်တို့နေဆဲဆန်းသစ်သောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ပိုပြီးပိုကောင်းပေးကျွန်တော်တို့၏အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေကြပါတယ်
ပုံစံ - PACA-104A
သန့်ရှင်းရေးအတွက်ဓာတုပစ္စည်းများသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ,deburring နှင့်မှိုအစိတ်အပိုင်းများ၏ polishing.
ကြာမြင့်ချိန်:ငွေပေးချေမှုလက်ခံပြီးနောက်ရက် ၂၀ အလုပ်လုပ်သည်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/metal-cleaning-agent.html
သို့: YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD.
လူမီနီယမ် Cleaner ပြီးတော့ပိုလန်
အကောင်းဆုံး သတ္တုသန့်ရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် သတ္တုသန့်ရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ် မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ
အလူမီနီယံအတွက်ပွတ်တိုက်သန့်ရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်ဤထုတ်ကုန်သည်အလူမီနီယံထုတ်ကုန်များကိုအရောင်တင်ခြင်းနှင့်အရောင်တင်ခြင်းအတွက်သင့်တော်သည်.ထုတ်ကုန်၏ texture ကိုတိုးတက်စေရန်ပိုမိုတောက်ပပြီးအသေးစိတ်မျက်နှာပြင်ရှိစေပါ.လျင်မြန်စွာနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရေနံအစွန်းအထင်းကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်,degreasing နှင့် oxide film ဖြစ်သည်.သန့်စင်ထားသောအလူမီနီယမ်လက်ရာကိုဓားဖြင့်သန့်စင်သည်,အဆိုပါ workpiece မထိခိုက်စေဘဲ. ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: ရိုက်ပါ:အရည် အဆင့်အတန်း:စက်မှုအဆင့် အသွင်အပြင်:အရောင်မဲ့ပွင့်လင်းသောအရည် pH တန်ဖိုး:၉-11 သတ်မှတ်ချက်:စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါသည် ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:ငွေပေးချေမှုလက်ခံပြီးနောက်ရက် ၂၀ အလုပ်လုပ်သည်ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:ပလတ်နှင့်အတူဒရမ်MOQ:ကီလို ၆၀၀
သံအတွက် Polishing သန့်ရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်ဤထုတ်ကုန်သည်သာမန်သံမဏိ၏ဓာတုဗေဒအရောင်တင်မှုအတွက်သင့်တော်သည်,low carbon steel နှင့် carbon steel.အဆိုပါပွတ်သံမဏိမျက်နှာပြင်မှန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်.၎င်းကိုအကြိုအတွက်အသုံးများသည်-plating နှင့်သိသိသာသာထုတ်ကုန်များ၏တောက်ပတိုးတက်စေနိုင်သည်. ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: ရိုက်ပါ:အရည် အဆင့်အတန်း:စက်မှုအဆင့် အသွင်အပြင်:အရောင်မဲ့ပွင့်လင်းသောအရည် pH တန်ဖိုး:၈-9.5 အပူချိန်ကိုသုံးပါ: သတ်မှတ်ချက်:စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါသည် ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:ငွေပေးချေမှုလက်ခံပြီးနောက်ရက် ၂၀ အလုပ်လုပ်သည်ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:ပလတ်နှင့်အတူဒရမ်MOQ:ကီလို ၆၀၀
ကြေးနီအတွက်သန့်ရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ် သတ္တုကြေးနီအမျိုးမျိုးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်.၎င်းတွင် deburring function တစ်ခုရှိသည်,mirror တောက်ပမှုရရှိရန်တောက်ပမှုကိုလျင်မြန်စွာတိုးတက်စေနိုင်သည်. သန့်ရှင်းရေးအချိန်များစွာသက်သာစေရန်အခန်းအပူချိန်တွင်လည်ပတ်နိုင်သည်. သန့်ရှင်းရေးစရိတ်ကနည်းတယ်လူအင်အားလည်းနည်းတယ်-ချွေတာ. ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: ရိုက်ပါ:အရည် အဆင့်အတန်း:စက်မှုအဆင့် အသွင်အပြင်:အရောင်မဲ့ပွင့်လင်းသောအရည် pH တန်ဖိုး:၇ အပူချိန်ကိုသုံးပါ:အခန်းအပူချိန် သတ်မှတ်ချက်:စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါသည် ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:ငွေပေးချေမှုလက်ခံပြီးနောက်ရက် ၂၀ အလုပ်လုပ်သည်ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:ပလတ်နှင့်အတူဒရမ်MOQ:ကီလို ၆၀၀
Metal Cleaning Agent	| Nettoyage Des Métaux	| Metallreiniger	| Средство Для Чистки Металлов	| Limpador De Metais	| Detergente Per Metalli	| धातु सफाई एजेंट	| Limpiador De Metales	| Metaal Reinigingsmiddel	| عامل تنظيف المعادن	| Chất tẩy rửa kim loại	| น้ำยาทำความสะอาดโลหะ	| Agen Pembersih Logam	| মেটাল ক্লিনিং এজেন্ট	| Metal Temizleme Maddesi